Ezweni lanamuhla unothile izibonelo isibonisi ewubuciko, nabesifazane kulolu hlu akuyona isinyathelo sokugcina, futhi ngezindlela ezithile abaholi, njengoba charm ubufazi abhekwa eliyingqayizivele futhi inhlanganisela yezimpawu eyingqayizivele ukuphelela kwasemhlabeni. Nokho, Ukukhululwa kwabomake mkhuba global ithonya elandayo emphakathini ubulili bubuhle wenze lambalwa ucabange iqiniso inchazelo ukuthi okukhulunywe ngaye ekuqaleni sizalwa nawo welithi "ebuthakathakeni." Akuyona ihlaya: izikole lempi amantombazane, noma ingabe ngenxa yalokhu iphethini zomlando yentuthuko yeningi ezweni lethu? Asithathe sihlolisise namaqiniso iSilekeleli Sokwazisa abesifazane yanamuhla sika.
ubuhle Slender yezempi yakha Airborne ambalwa ukubukeka kungavamile, kodwa uma ucabangela ukuthi akuyona somNyango wezeMpilo, a Leli qembu umkhuzi bokudla parachutes ngesikhathi esifanele futhi ngaso sonke ukucabanga ngalokho okuyokwenzeka emadodeni esikhathini esizayo ... Okwamanje, konke isiqala nje. izikole Military for girls wavula iminyango yabo nje eminyakeni embalwa edlule, ukuba ngqo - kusukela ngo-2008. Phakathi nalesi sikhathi, kwathi angamakhulu amaningana abesifazane kule isikhundla lezi zikhulu asebethweswe iziqu ezikhungweni zemfundo kanye unyawo endleleni abavikeli we lawobaba. Isenzo nobuqhawe ngempela manje futhi inzuzo zesifazane.
Ukwamukelwa School Military inikeza impela Ukukhetha inqubo sina. Kuphumelele ekomidini yezokwelapha - hhayi ngesisekelo ukuze zibuyiselwe lokuthandwa abafundi. Uma thatha uqaphele, ukuthi nembangi indawo Ryazan Ephakeme Airborne Command School - intombazane, kungaleyo ndlela kuphela ngincome isibindi nokuzimisela Engxenyeni fair lesintu. Huge mncintiswano futhi sikhulu ezinzima yokungena izivivinyo namanje ngaphansi kwamandla abanye umnqobi isiketi. Naphezu kwakho konke, amantombazane avame ukuba babuthakathaka kunamadoda kunoma iyiphi humanities noma ukulungiselela ngokomzimba. Okuhle noma okubi, isikhathi uyakuzahlulela.
Phakathi naleso sikhathi ...
Namuhla, izikole lempi amantombazane babé ekhaya okwesikhashana. Nge iso umsebenzi olusemthethweni abiturientki kahle futhi ngokubekezela kuze bonke lobu bunzima futhi ukuswela zokuphila sesosha. Mhlawumbe umfundi isitayela zibhalwe futhi kubonakale kancane kuyindida, akazange ukukhonza njengomdala isikhathi sokuzindla ngalokho kangakanani ukuphila ngokuvumelana neziqondiso lempi futhi uhambisane isiyalo esiqinile, besindwa unsuitability zemvelo. Noma kunjalo, "ubuciko impi" lithole kakade ukuqashelwa yayo engxenyeni zesifazane wezwe lakithi. Futhi kunzima ukuba uvume. Yiqiniso, ikakhulu amantombazane yesimanje ucabangela nethemba kokuhlukana High Heels futhi wenze-up ukuze achithe ukuphila kwakhe ekukhonzeni abantu bakhe ngombono ambalwa kumnandi of okungokoqobo. Phakathi naleso sikhathi, Russian Armed Forces agcwaliswa izisebenzi zesifazane ngaphakathi the bombo of ladies uzimisele.
Suvorov esikoleni lempi amantombazane
Vumela umlando wezwe futhi akamazi owesifazane ukuba Nokho ukhishwa elisezingeni jikelele, ethi, "Ulisotja ezimbi ongenayo baphupha abe jikelele" oqhubeka uphila. Akubuzwa, lo "iqhawe" abasha nayo bancishwa isifiso esingokwemvelo hhayi ukuyeka lapho. Mhlawumbe kungenxa ithuba zanamuhla ngoba amantombazane ukuba abe ehlonishwayo lempi sokuqeqesha amasosha kuyoba ezinye isisusa sifinyelele impumelelo eliphakeme emkhakheni lempi. Ngemva amasosha bekusolo, futhi kuyoba model of imfundo ukushisekela izwe, kanye abafundela okusezingeni eliphezulu ehhovisi kwababusi. Kumele kuqashelwe ukuthi le nqubo yokufunda ezikoleni yalolu hlobo kubangelwa hhayi kuphela lapho etadisha ngokujulile yobuciko lempi humanities, kodwa futhi kusikisela ukusetshenziswa ezihlukahlukene izinhlelo kanye nezifundo ukuthuthukiswa olunzulu ubusosha: etiquette, i ballroom ukudansa nomculo ziyingxenye ebalulekile yesiko best of imfundo wezempi.
Sinzima sasekhaya zeviki
izikole Military for girls ngekwehlukahlukana kwalo, yebo, akuzona indawo lapho izwi lecilongo izingcingo wethimba njalo futhi uyakhathaza lapho mushtrovaniem "nokucima izibani / izinsimbi." Isiyalo ukusebenza academic - wokuqala nomkhulu kunabo bonke. Owesifazane ngokwemvelo benawo nemizwa umthwalo, futhi ngisho noma lokho afuna ukufeza, ngokuqinisekile ukufeza lokhu. Ngakho-ke, ezinye izici bemvelo yentombazane ngokuvumelanayo angena uzazi Kumsebenzi isimiso izidingo. imfundo Suvorov akuniki kuphela intombazane ilungelo, ngaphandle emnyango izivivinyo ukuze ube isicelo cishe kunoma iyiphi ephakeme lempi izikhungo zemfundo, kodwa kuthuthukisa ukukhula kwakhe okungokomoya kumuntu futhi ungumthombo ayisisekelo okuphila. Girls-amasosha belingana guys kufanele ufunde amagatsha okunjalo ezindabeni zezempi:
isivikelo izikhali zembubhiso;
Phezu imfundo wezempi ehlonishwayo kuhlanganisa sokutadisha izilimi 4 angaphandle, ukuhlonipha ballroom, kanye yethula yemikhosi olandelwayo. Nokho, naphezu izimo abafundi umsebenzi elilungile ngokomzimba, komkhuba ubuthakathaka besifazane ngezinye izikhathi phuma. Noma kunjalo, kukhona amabutho, nokuzithiba uyangenelela.
Okufanele ukwenze nalokho okudingekayo
Okokuqala kubalulekile acabangele ukuqeqeshwa abanye abathile noma ukuthi ukuqeqeshwa izikhungo Ministry Wezokuvikela. Ngokwesibonelo, ukuxhumana lempi iziqu amasosha esikoleni kungenzeka onguchwepheshe izinkomba ezifana:
Radio zokuxhumana, yezokusakaza kanye ithelevishini.
amanethiwekhi Ukuxhumana kanye usuke izinhlelo.
Imizila ezokuxhumana izinhlelo.
Kuyaphawuleka ukuthi Voronezh Military School for girls ukunikela nesangoma sezulu okukhethekile. Nokho, kubalulekile futhi okufunwa kakhulu e Russian Air Force. Ukuze Bantu babhalisele lolu isikhungo ephakeme lempi ezemfundo, kuzomele uqale ukusebenzisa kuya commissariat zendawo unamathisele amadokhumenti alandelayo:
ikhophi yesitifiketi sokuzalwa;
ikhophi idokhumenti efakazela ukuthi singobani nokuhlala;
professional ibalazwe Ukukhetha ngokwengqondo;
ikhophi idokhumenti imfundo yesibili;
izithombe ezintathu (ngaphandle usayizi headgear 4,5h6 amasentimitha);
Imibhalo yezokwelapha yefomu ezimisiweyo;
nobuntu isikole zasempini noma ucwaningo.
Ngaphezu kwalokho, isicelo kumele kudlule wonke amazinga ukuqeqeshwa ngokomzimba (egijima 100 1000 m), kanye izivivinyo kulotshiwe izifundo: izibalo, i-physics, isiRashiya (ezitholwe). Ezimweni eziningi, uhlu kwemibhalo edingekayo ngenhla obschetrebuemym neyamukelekayo cishe kunoma yisiphi uhlobo ejensi lempi zemfundo.
umsebenzi osendaweni ezibalulekile
Uma umyalo a division of owesifazane akuyona eyinqaba, into kungamukeleka ngaphezulu njengoba ayenzi nemisebenzi yabo ibhizinisi amabutho isimo sakhe? Military Logistics School silungiselela nezikhulu ukudla, inkonzo izingubo, futhi ukhiqiza zokugcoba ukunikeza ochwepheshe. Amakhono iyona mate engcono zesifazane kwezomnotho. Ngakho-ke, i-Army idinga Ochwepheshe abakwaziyo ukuhlela isekelo elifaneleko nokusetjenziswa ukudala izimo ezikahle yokugcina futhi kuthuthwe ngendlela ephephile osendaweni ebalulekile ukudla, impahla kanye energy imithombo.
abesifazane anamuhla uyakwazi futhi kufanelekile ngokugcwele ukukhonza wobaba. Phela, ibutho - ubunye abantu ukubonakaliswa kwayo eqinile nasezinkolelweni - ukuvikela Motherland - okuwumsebenzi akuxhomekile ubulili. Ngakho-ke, bafowethu, ulalele okushiwo inhliziyo, futhi zonke eyeqisayo ubandlululo ushiye eyethile inhliziyo. Ubani ongafaka ukuvikela ingane ungcono umama? Futhi amadoda - izingane zonina ... Indida zokuphila.
Flea ezinjengenyanga for namakati: ukubuyekezwa, abakhiqizi, izinhlobo kanye nezici isicelo
Udokotela-sezifo - ubani futhi kungani sasidingeka?